DEG DEG: Xiddig horay uga soo ciyaaray dalka Ingiriiska oo toogasho lagu dilay – Gool FM
(Yurub) 19 Sebt 2019. Daafacii hore ee kooxda Burton Albion ee Kelvin Maynard ayaa taagasho lagu dilay isagoo ku sugan Magaalada Amsterdam sida ay xaqiijiyeen Booliska dalka Holland.
32-sano jirkaan ayaa lagu dhex toogtay Baabuurkiisa, Booliskuna waxa ay ku hawllan yihiin sidii ay u heli lahaayeen marqaatiyaasha, iyagoo ku raad jooga labo ruux oo la tuhmayo inay ku baxsadeen Mooto madow.
Saraakiil ka tirsan xarunta dab-damiska ee u dhoweyd halka ay mashaqadu ka dhacday ayaa isku dayay inay caawiyaan Maynard, laakiin markii dambe ayuu u dhintay dhaawicii soo gaaray.
Ciyaaryahanka reer Holland kaasoo sidoo kale u soo ciyaaray Royal Antwerp ayaa joogay kooxda aan ka midka ahayn horyaalka Holland ee Alphense Boys.
“Qof waliba oo jooga Burton Albion wuxuu ka xun yahay inuu wax ka ogaado oo uu maqlo geerida naxdinta leh ee ku timid ciyaaryahankeennii hore ee Kelvin Maynard,” ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay kooxda, waxaana ay ku dartay: “Waxaan u tacsiyadeyneynaa dhammaan qoyskiisa iyo asxaabtiisa waqtigan adag.”
Maynard wuxuu ku biiray kooxda Burton bishii November ee sanadkii 2014-kii kaddib markii loo magacaabay ninka reer Dutch ee Jimmy Floyd Hasselbaink inuu macallin u noqdo kooxdaas.
Waxa uu Maynard ka soo tagay Burton bishii Janaayo ee sanadkii 2017-kii si uu ugu biiro Kooxda reer Holland ee Spakenburg.